गोरेका भाईसहित १२ जना सुन तस्कर इन्टरपोलको ‘रेड नोटिस’ मा, अरु कोको परे ? «
गोरेका भाईसहित १२ जना सुन तस्कर इन्टरपोलको ‘रेड नोटिस’ मा, अरु कोको परे ?
प्रकाशित मिति : ९ आश्विन २०७५, मंगलवार ११:०४
काठमाडौँ । ३८ किलो सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ का भाईसहित १२ जनालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी अपराध संगठनको नेशनल सेन्ट्रल ब्यूरो (एनसीबी) ले ‘रेड नोटिस’ राखेको छ । काठमाडौंस्थित एनसीबीले चार महिनाको अवधिमा १३ जनाविरुद्ध रेड नोटिस जारी गरेको छ भने ११ जनाविरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको छ ।
पछिल्लो समय जारी भएको ‘रेड नोटिस’ मा ३८ क्विन्टल सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएका व्यक्ति सबैभन्दा बढी छन् । संगठिन सुन तस्करी, अपहरण र हत्यामा संलग्न भएको आरोपमा रमेश उप्रेती, बेनु श्रेष्ठ, मोहनकुमार अग्रवाल, गोविन्दप्रसाद तिवारी, टुकबहादुर मगर, भोजराज भण्डारी, रोहित आचार्य, चेतनाथ भण्डारी, कृष्ण बस्नेत, कृष्ण गोपाल अग्रवाल, हरिशरण खड्का र मोहमद उस्ताम मियाँविरुद्ध रडट नोटिस जारी भएको हो ।
विभिन्न किसिमका जघन्य एवं संगठित अपराधमा संलग्न भई विदेशमा रहेका अभियुक्तलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले इन्टरपोलमा नोटिस जारी गर्छ । हालसम्म जारी गरिएका नोटिसमध्ये २९ वटा रेड र २४ वटा डिफ्युजन छन् । उनीहरु मध्ये रमेश उप्रेती सुन प्रकरणका मुख्य अभियुक्त भनिएका भाइ हुन् । त्यस्तै, अग्रवाल मुख्य लगानीकर्ता हुन् । उनीहरुसहित सरकारी छाप तथा हस्ताक्षर कीर्ते गरेको आरोपमा सलबहादुर गुरुङविरुद्ध पनि रेड नोटिस जारी भएको छ ।
पछिल्लो चार महिनाको अवधिमा ११ जनाविरुद्ध डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको छ । जसमा मानबेचबिखन मुद्दा अन्तरगत प्रेरणालक्ष्मी मल्ल, विराज यादव र सन्तोषकुमार ल्वागुनसमेत गरी तीन जना छन् । त्यसैगरी जबरजस्ती करणी मुद्दाका दिपक श्रेष्ठ र विकास गौतमविरुद्ध पनि डिफ्यूजन नोटिस जारी भएको छ । उनीहरु दरबारमार्ग बलात्कार प्रकरणका आरोपित हुन् ।
अपहरण, हत्या र संगठित अपराधमा संलग्न प्रयास पराजुली, संगठित अपराध सञ्जालको स्थापना गरेको आरोप लागेका सन्दिप खड्का, ठगी मुद्दाका सबिन प्रकाश दनुवार, जबरजस्तीकरणी मुद्दाका हेमराज राई, हत्यामा संलग्न लालबहादुर खड्का र होमबहादुर कार्की छन् । अपराधी पक्राउसँगै जारी नोटिस र डिफ्युजन स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । इन्टरपोल नोटिसको आधारमा हालसम्म ३२ जना पक्राउ परिसकेका छन्